Miyuu Wilshare Dheeli Karaa Kulanka Axada Ee Stoke? %
Miyuu Wilshare Dheeli Karaa Kulanka Axada Ee Stoke?
Jack Wilshare wuxuu noqon doonaa mid diyaar u ah Arsenal kulanka ay Axada la dheeli doonan dhigooda Stoke ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League, ee wadanka Ingiriiska, sida uu ka dhawaajiyay Caawiyaha macalinka Arsenal ee Steve Bould.
Laacibkaan khadka dhexe ka dheela ayaa wuxuu tababar uu la qaatay kooxdiisa Isbuucaan kadib markii uu kasoo kabanayo dhaawac dhanka Qancowga ah oo soo gaaray, islamarkaana uu ku seegay ciyaarihii uu xulkiisa England wajahay Italy iyo Holland.
“Jack Wilshare wuu tababartay shalay marka waa mid fiican. Qof walba waa uu soo laabtay hadda,” ayuu Bould ka yiti Khamiistaan maanta ah shir Jaraa’id, maadaama Arsena Wenger uu ahaa mid ka maqan shirka jaraa’id ee ka hor kulanka Stoke.
“Waan heli doonaa wanaageena waliba wa xoogaa subaxaan maanta ah, laakiin Jack wuxuu fiicnaa shalay,” ayuu ku daray hadalkiisa.
Dhanka kale, mar wax laga weydiiyay xaalada dhaawac ee ciyaaryahan Alexandre Lacazette, kaasoo wali aan la hubin xaladiisa kadib markii qaliin looga sameeyay Qancowga Bishii Febraayo ayaa wuxuu awoodi waayay inuu faah-faahin uu ka bixiyo.
“Ma garan karo, waa uu tababartay, waa uu tababartay shalay, laakiin ma hubo hadii uu nagu lug lahaan karo Isbuucaan bilowgiisa,” ayuu kusoo koobay.
Sikastaba, Arsenal ayaa hada ka fadhisa shaxda kala horeynta ee Premier League, kaalinta Lixaad, iyadoona ka dambeysa Chelsea, Tottenham, Liverpool, Man United iyo Man City, waxaana shaki uu ku jiraa inay usoo baxaan xagaaga dambe Champions League.
ArsenalArsenal vs StokeEPLPremier LeagueWilshare
Gabriel Jesus Oo Man City Ka Diiday Dalab Heshiis Kordhin Ah [Sabab]
Cayaartoyda Qaranka Soomaaliyeed ee Taekwondow-ga oo Guul kasoo Hooyey Ciyaaraha 45th Dutch Open Taekwondo Championships 2018